TAFA-PIFIDIANANA : Mailhol André Christian sy Arlette Ramaroson -
AccueilRaharaham-pirenenaTAFA-PIFIDIANANA : Mailhol André Christian sy Arlette Ramaroson
11/10/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mailhol André Christian
Hitondra vina sy fahazavana ho an’i Madagasikara
Efa manana ny vina maty paika avokoa ireo kandidà ho Filoham-pirenena. Efa manomboka ihany koa ny fitetezam-paritra ataon’izy ireo amin’ny fanatonana ny vahoaka.
Fa ho an’ny kandidà laharana faha-34, Mailhol André Christian Dieu Donné, nitety faritra maro teto an-drenivohitra ny ekipa mpanara-dia sy mpanohana azy nampahafantatra ny vinan’ity kandidà ity.
Marihina fa anisan’ny voizin’ny kandidà laharana faha-34, izay hitondrany ny programan’asany ny hoe “Vina sy Fahazavana ho an’i Madagasikara”. Tafiditra amin’izany sy ny goavana hoentiny hanaovana fanamby ho an’ny vahoaka ny famerenana ny Iles Eparses, izay fitambaran’ireo Nosy kely miisa dimy aty amin’ny fari-dranomasin’i Madagasikara, ka nogiazan’i Frantsa.
Tsy latsa-danja amin’ny vinany ihany koa ny sosialim-bahoaka, indrindra fa ny fandriam-pahalemana, ny tontolon’ny angovo sy ny famokarana herinaratra, ny vidin’ny solika sy vidim-piainana, sns.
Ankoatra izay, anisan’ny vinan’ny kandidà laharana faha-34 ihany koa no hampakatra ny harin-karem-pirenena. Izany hoe, hanatsara ny tontolon’ny toekarena, izay andry hiankinan’ny fiainam-pirenena…
« Ny fahamarinana manandratra ny firenena »
Ao anatin’ireo kandidà mbola tsy miroso loatra amin’ny fampielezan-kevitra. Amin’ny hetsika rehetra ataony, dia manentana hatrany ny mpiifidy izy hanara-maso ny fifidianana, ary mitaky ny fanadiovana ny fifidianana. Anisan’ireo nandray anajra fitenenana tetsy Ambohijatovo ity kandidà laharana faha-18 ity, ary nitondra ny fanehoan-keviny amin’ny tsy fetezana amin’io fifidianana io. « Diovy fa feno hosoka ny fanomanana ny fifidianana », araka ny sora-baventy asehon’ity kandidà mpitsara iraisam-pirenena ity.
« Ny fahamarinana manandratra ny firenena » no teny filamatra entin’ity kandidà avy amin’ny Tiako ny tanindrazako ity. Anisan’ny vohizin’ity kandidà ity amin’ny hetsika ataony ny « Fiadanana, Fifankatiavana, Fandriam-pahalemana ary Fahamarinana … Izany ankehitriny no andrandraina, mendrika sy sahaza ny Malagasy ». Anisan’ny nahafantarana azy ihany koa ny maha filohan’ny fikambanana Nosy Malagasy azy. Io fikambanana io, izay mitaky ihany koa ny famerenana ireo Nosy manodidina ho an’i Madagasikara.